Football Khabar » को हुन् बार्सिलोनाले भित्र्याएका युवा फरवार्ड ‘नयाँ क्रिस्टियानो’ ?
को हुन् बार्सिलोनाले भित्र्याएका युवा फरवार्ड ‘नयाँ क्रिस्टियानो’ ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ । क्लबले आज पोर्चुगलका २० वर्षका युवा फरवार्ड फ्रान्सिस्को ट्रिनकाओलाई अनुबन्ध गरेको औपचारिक घोषणा गरेको हो । बार्सिलोनाले उनलाई पोर्चुगलको शीर्ष लिग क्लब एससी ब्रागाबाट अनुबन्ध गरेको हो ।
दुई क्लबले आज खेलाडी किनबेचको औपचारिक घोषणा गरे पनि ट्रिनकाओ आगमी समर सिजनमा मात्रै क्याम्प नोउ आइपुग्नेछन् । सम्झौता र घोषणा अहिले भए पनि उनी यो सिजनको अन्त्यसपछि मात्रै स्पेन आइपुग्नेछन् ।
बार्सिलोनाले ट्रिनकाओका लागि ३१ मिलियन सरुवा फी तिरेको छ । उनले बार्सिलोनासँग सुरुआतमा पाँच सिजनका लागि सम्झौता गर्नेछन् । जसअनुसार उनी बार्सिलोनामा सिजन २०२४–२५ सम्म हुनेछन् । र, बार्सिलोनाले उनको रिलिज क्लब ५०० मिलियन युरो कायम गर्नेछ ।
मात्रै २० वर्षको उमेरमा उच्च स्तरको फुटबल खेलिरहेका ट्रिनकाओलाई पोर्चुगलमा ‘नयाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो’ भनेर चिनिन्छ । उनको खेल्नै शैली पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोकै जस्तो छ ।
जारी सिजन ब्रागाका लागि ट्रिनकाओले २१ खेल खेल्दै ३ गोल गरेर ६ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । पोर्चुगलको विभिन्न उमेर समूहबाट खेल्दै आएका उनी हाल यु–२१ टोलीमा छन् ।
यसअघि यु–१९ टोलीमा रहँदा उनले महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेर २०१८ मा युरोपियन च्याम्पियनसिपको उपाधि जितिसकेका छन् । सो प्रतियोगितामा उनी ५ गोल र ३ असिस्टसहित सर्वाधिक गोलकर्ता बनेर गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
ट्रिनकाओको खास विशेष र खुबी भनेको फ्रन्ट लाइनमा उनी जुन भागबाट उत्तिकै खुलेर खेल्न सक्छन् । यद्यपि, उनी अहिले भने नियमित रूपमा विंगरमा रूपमा खेलिरहेका छन् । देब्रे खुट्टा चलाउने खेलाडी भए पनि उनी एक पूर्ण गोलकर्ता मानिन्छन् । उनको गोल तथ्यांक हेर्दा देब्रे र दाहिने खुट्टा तथा हेडिङमा पनि उत्तिकै राम्रो क्षमता देखिन्छ । त्यही भएर पनि उनलाई ‘नयाँ क्रिस्टियानो’को उपमा दिइएको हो ।
ट्रिनकाओको अनुबन्धपछि बार्सिलोनाको नयाँ पुस्ताको आक्रमण लाइनमा एक प्रमुख खेलाडी थपिएका छन् । बार्सिलोनाले भविष्यलाई ध्यानमा राखेर उनलाई अनुबन्ध गरेको हो ।
प्रकाशित मिति १७ माघ २०७६, शुक्रबार २२:००